Tirakoobka Netflix (2020) - Xaqiiqooyinka, Isticmaalka & Faahfaahinta Dakhliga - Madadaalo
Tirakoobka Netflix (2020) - Xaqiiqooyinka, Isticmaalka & Faahfaahinta Dakhliga
Adiga, sariirtaada, waqti badan oo firaaqo ah, iyo u muuqdo god hoose oo qanacsan. Haddii aad ku dhex nooleyd cabirkii cadaabta ee limbo in 2020 ilaa hadda la joogo, sawir kasta oo ka mid ah ma noqon doono dhacdo aad u dhib badan.Haddii lagugu qoro adeegga fiidiyowga fiidiyowga, fursadaha ayaa jira, waa Netflix. Taasi ra’yi ma ahan; tirooyinka naftooda ayaa u hadlaya. Netflix hadda waxay leedahay macaamiil ka badan 182 milyan adduunka oo idil, waxaana la filayaa in tiradaani ay kororto.
Caannimada darteed, maanta waxaan daaha ka rogeynaa qaar ka mid ah tirakoobyada ugu muhiimsan ee Netflix si aan u fahamno waxa ka dhigay adeegan qulqulka badan.Haddii taasi u muuqato mid xiiso leh, aan ku dhex galno.
Netflix India StreamFest - Ku raaxayso 2 maalmood Daaqad
Xogta Netflix & Xaqiiqooyinka - Macluumaad Dhameystiran
Waxaa lagu soo qaatay 1997 ganacsade Mareykan ah Marc Randolph iyo Reed Hastings (agaasime guud oo hadda ah), Netflix waxay ku bilaabatay bilow hoose. Sannadkii 1998, labada nin ee hal abuurka leh waxay soo bandhigeen degelkooda oo ay ku bixiyaan adeegyo kiro ah oo DVD ah iyada oo loo marayo qaabka kirada ee kirada lagu bixiyo. Netflix wuxuu lahaa 925 cinwaan oo la heli karo intii lagu jiray sanadkiisii ​​ugu horreeyay, qandaraas aad u adag oo ah 13,300 oo cinwaan oo maanta la heli karo.
Sannad ka dib, Netflix wuxuu u beddelay fikrad bil kasta ah. Isla waqtigaas, algorithm-kii ugu horreeyay ee shirkadda, Cinematch, ayaa la soo saaray. Macaamiisha ayaa hadda ka dooran kara filimo kala duwan iyo barnaamijyo TV oo si toos ah loola beegsanayo. Tan waxaa suurto galiyay algorithm oo kugula talinaya waxyaabaha caanka ah ee ku saleysan qiimeynta daawadayaasha.
Soo noqoshada Qarniga:
Netflix waxay sii waday inay si xawli ah u sii socoto sanadihii la soo dhaafay, waxayna uruurisay 300,000 oo isticmaale sanadkii 2000, 600,000 2002, iyo 4.2 milyan 2005. Kordhinta xawliga ah waxaa qayb ahaan loo aaneynayaa awooda baahsan ee DVD player.Si dhakhso leh loo aqoonsado kartida, tiro ka mid ah shirkadaha waaweyn ee waaweyn iyo kuwa hiwaayadda u ah hiwaayaddu waxay u gudbeen dhinaca aagagga adeegga qulqulka qadka. Sannadkii 2002, Redbox waxay aasaastay degel noocan oo kale ah waxayna sii waday ficil aan lagu aqoon sababaha lagu tartami karo ee hal abuurnimada ganacsi: ugaarsiga.
Waxay u soo bandhigeen Mitch Lowe, oo ah aasaasihii fulinta ee Netflix, jago kooxdooda ka tirsan wuuna aqbalay. Midka ugu horreeya ee caqabado badan oo Netflix ah ayaa wajihi doona inta ay kor u kacday 2000s.
Ka dib markii uu ka fogaaday heshiis lagu iibsanayo Netflix $ 50 milyan, Blockbuster wuxuu bilaabay 'Blockbuster online', isaga oo siinaya dadka isticmaala kirada DVD-yada aan xadidnayn iyadoo laga qaadayo $ 19.99 bishii. Tani wax yar ayey ka qaban doontaa inay joojiso Blockbuster inuu noqdo cashar 101 ah oo ku saabsan sida aan loo maareeynin rukhsaddaada xukunka inta lagu jiro xilliyada sida weyn loo beddelayo.
Markii uu ahaa tartame weyn, oo si toos ah madaxa ugu garaacaya Netflix, Blockbuster wuxuu ku guuldareystay inuu arko da 'sii kordheysa oo dadweynaha guud ahaan aysan u baahnayn ama aysan rabin DVD-yada jirka.
Iyadoo ay xubno ka yihiin 600,000 oo ku sugan Mareykanka, Netflix ayaa la shaaciyay 2002, sameynta 'bixinta bilowga qiimaha (IPO)' oo ah $ 15 saamigiiba . Shirkaddu waxay sii waday inay iibiso $ 5.5 milyan oo saamiyadeed oo wadaag ah, oo keensatay $ 82.5 milyan. Sannadkii 2003, Netflix waxay ku dhawaaqday macaamiisheeda 1 milyan.
Ka fiirsashada wareejinta khadka tooska ah waxay caadi u ahayd guddiga Netflix. Sannado badan tan iyo markii la aasaasay, abuurayaashu waxay tixgeliyeen inay filimo ku bixiyaan internetka. Laakiin xawaaraha xogta iyo kharashaadka xaddiga xawaaraha looma oggola. Ugu dambeyntiina, bartamihii-2000-meeyadii, hagaajinta isku xirnaanta iyo adeegyada internetka ee la awoodi karo ayaa macaamiisha fursad u siiyay inay filimada kala soo baxaan internetka.
Si ballaaran looma oga fikradda 'sanduuqa' Netflix 'oo ku dhowaad suuqyada ku yaal 2005, taas oo ah qayb ka mid ah qalabka qalabka ee soo dejisan kara filimada habeenkii, taas oo ka dhigaysa inay diyaar u yihiin inay daawadaan maalinta xigta.
Netflix waxay heshay xuquuqda filimka, sanduuqa ayaa loo qaabeeyey oo diyaar u ah in la sii daayo laakiin ka dib markii la ogaado YouTube-ka oo la fiirsado guushiisa inkasta oo ay ka kooban tahay qeexitaan hoose, ‘sanduuqa Netflix’ waa la xoqay oo la ganaaxay.Taabadalkeed, fikradda qulqulka ayaa la qaatay, mashruuc arki doona dhammaystirka 2007.
Bishii Oktoobar ee ugu horreysay, 2006, Netflix waxay abaalmarin $ 1,000,000 ah siisay soo-saaraha ugu horreeya ee algorithm-ka talo-bixinta fiidiyowga oo garaaci lahaa, oo horumarin doona algorithm-ka hadda jira 10%. Abaalmarintan waxaa la siiyay seddex sano ka dib BellKor's Pragmatic Chaos. Koox ka kooban toddobo xisaabyahanno, injineero, iyo saynisyahanno kumbuyuutar oo ka kala yimid Mareykanka, Austria, Canada, iyo Israel.
Maaddaama iibka DVD-gu hoos u dhacay 2006 ilaa 2011, Netflix wuxuu bilaabay inuu ka beddelo qaabkiisii ​​asalka ahaa ee aasaasiga ahaa ee DVD-yada wuxuuna soo bandhigay fiidiyow isagoo dalbanaya internetka. Intii lagu gudajiray maalmihii kirada DVD-ga ee khadka tooska ah, gallery-ka shirkadu wuxuu ku faanay in ka badan 100,000 cinwaano DVD oo kala duwan. Laakiin way bixin kartaa maya in ka badan 1000 TV iyo filimada loogu talagalay bilaash g macaamiisheeda 2007.
Dib-u-fiirin, boodboodkan hamiga badan ayaa shirkadda ku kici karay heshiis aad u weyn. Hase yeeshe, markii ay caan baxday oo dadweynihii guud door biday talaabooyin yar intii lagu guda jiray hawshoodii daawashada filimka, tirada cinwaanada loo heli karo qulqulka ayaa kordhay. Bishii Juun 2009, Netflix waxay heshay xuquuqda 12,000 filim iyo bandhigyo.
Qeybta ugu weyn ee wax ku biirisa macaamiisha si ay daacad ugu ahaadaan adeegga qulqulka tan iyo maalmihi ugu horreysay waa algorithm. Nidaamka talo bixinta ee dib loo rogay, Cinematch, kaliya maahan in daawadayaasha ay ku dhagan yihiin waxyaabaha cusub, laakiin sidoo kale waxay ku talisay bandhigyo hoose iyo filimaan.
Tani waxay ka faa'iideysatay qof walba oo ku lug lahaa, macaamilku wuu arki karaa waxyaabaha haddii kale mugdi ku jira, istuudiyo yaryar oo soo saaraya ayaa helay aqoonsiga ay rabeen, iyo tan ugu muhiimsan, Netflix ayaa sii waday kororka.
Caalamiyeynta iyo Ballaarinta
Tobankii sano ayaa ku dhowaa dhammaadkiisa, Netflix wuxuu isu diyaarinayay suuqa Caalamiga ah. Iyagoo raba inay ballaadhiyaan adeegyadooda qulqulka ka baxsan Mareykanka, Netflix waxay ka bilaabatay Kanada 2010. Dadka Kanada waxay u qori karaan adeegga $ 7.99 bishiiba. Sicir si habboon loogu sifeeyey inuu yahay 'kan ugu hooseeya, ugu dagaal badan ee aan abid abid ku helno meel kasta oo adduunka ah' oo ay iskaasime ka yihiin Hastings.
Si kastaba ha noqotee, xulashada hore ee mawduucyada ayaa aad ugu hooseysay Canadian Netflix. Sannadkii 2012, Mareykanku wuxuu bixiyey 10,625 cinwaanno u gaar ah, halka tirada Kanada ay ahayd kaliya 2,647. Hase yeeshee, iyadoon loo eegin xulashada xaddidan ee xaddidan, Netflix waxay kasbatay hal milyan oo macaamiil ah (qiyaastii 3% dadka Kanada) wax ka yar hal sano.
Sannadkii 2011, shirkadda Netflix waxay ku dhawaaqday qorshayaasheeda ah inay ballaariso adeegyadeeda baahinta ee Latin America. Tani waxay noqon doontaa ballaarintooda ugu ballaadhan illaa maanta, isla markiiba ka dib markii lagu dhawaaqay, saamiyada Netflix waxay kordheen 8%. U jebinta suuqa Latin America waxay ka dhigan tahay in Netflix ay hadda galaangal u leedahay 600 milyan oo qof. Xitaa sidaas oo ay tahay, faafitaanka Latin America ma ahayn mid deg deg ah sidii shirkaddu rajeyneysay.
La'aanta khadka sare ee internetka iyo xawaaraha internetka oo gaabis ah ayaa caqabad ku ah koritaanka degdegga ah. Kaliya 20% dadweynaha ayaa heli kara xawaaraha internetka oo ka weyn 500 kB / s ilbiriqsi halka Netflix ay u baahan tahay 800 kB / s ilbidhiqsi si tartiib tartiib ah loogu socodsiiyo. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay sii waday ballaadhinteeda illaa 43 dal iyo dhulal ku yaal Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika, iyo sidoo kale Kariibiyaanka.
Dabayaaqadii 2011, Netflix waxay lahayd qorshayaal soo saar iyo maalgelin ah waxyaabaha asalka u ah. La qabsiga Guriga Kaararka ayaa lagu wadaa in la sii daayo 2013.
Ballaadhinta Yurub ayaa bilaabantay 2012, iyada oo laga bilaabay Boqortooyada Ingiriiska iyo Ireland. Dabayaaqadii 2012, Netflix wuxuu ku fiday Denmark, Sweden, Finland, iyo Norway. Nederland waxay ahayd wadanka kaliya ee Netflix balaarisay sanadkii 2013, maadaama shirkadu ka gaabineysay balaarinta si loo xakameeyo qarashka ku qoritaanka. Dhamaadkii 2013, Netflix waxay heshay ku-dhawaad ​​32 milyan oo isticmaaleyaal ku nool Mareykanka iyo 10 milyan oo isticmaaleyaal ah oo ku nool Yurub iyo Kanada.
Bishii Sebtember ee 2019, adeegyo qadka tooska ah looga helo ayaa laga heli karaa Austria, Belgium, France, Switzerland, Luxembourg, Germany iyo India. Qaabilaaddu waxyar bay ka diirneyd Yurub iyo Hindiya, laakiin cadaawad bay ku ahayd Faransiiska. Faransiisku wuxuu rumeysnaa imaatinka Netflix inuu burburin doono waddanka 'ka reebista dhaqanka'. Si looga hortago tan, Netflix waxay go'aansatay inay abuurto silsilad Faransiis ah: 'Marseille', oo dib u habeyn lagu sameeyay Netflix Original, 'House of Cards'.
Ballaarinta Australia, New Zealand iyo Japan waxay dhacday horraantii 2015. Dabayaaqadii 2015 Netflix wuxuu galay suuqyada Talyaaniga, Boortaqiiska iyo Isbaanishka. Shirkadda ayaa sii waday ballaarinta Aasiya iyadoo laga bilaabay Pakistan, Singapore iyo Kuuriyada Koofureed.
Bishii Janaayo ee sanadka 2016, shirkadda Netflix waxay shaacisay inay ku sii fideyso ilaa 130 goobood oo cusub, oo ay ku jiraan inta badan Afrika. Maanta, adeegyada qadka tooska ah ee shirkadda ayaa laga heli karaa adduunka oo dhan, iyada oo laga reebi karo marka laga reebo Mainland China iyo gobollada ay ku xiran tahay cunaqabateynta Mareykanka sida Suuriya, Crimea iyo Waqooyiga Kuuriya.
Laga bilaabo 2013, oo leh taxane caan ah oo loo yaqaan 'House of Cards', Netflix wuxuu bilaabay inuu soo saaro waxyaabo ku habboon gaar ahaan adeegyadeeda baahinta. 'Orange Is The New Black' ayaa la soo saaray bishii Luulyo ee 2013 waxayna haysaa cinwaanka ah inuu yahay taxanaha asalka ah ee loogu daawashada badan yahay Netflix. Baahida baahsan darteed, showga waxaa la sii daayay 6 sano oo dheeri ah, wuxuu ku egyahay 2019 xilli ciyaareedkiisii ​​toddobaad iyo kii ugu dambeeyay.
Iskaashi la leh Marvel Telefishanka, Netflix wuxuu soo saaray taxane toos ah oo superhero diirada saaraya oo muujinaya superhero badan iyo iskudarsashada qorshooyinka. Netflix waxay sidoo kale la saxiixatay agaasimayaal kala duwan iyo abuurayaal heshiisyo sanado badan soconaya, taasoo keentay soo saarista riwaayadaha muddada 'Marco Polo' iyo sitcom animated 'BoJack Horseman' iyo kuwa kaloo badan. Agaasimayaasha la saxiixay waxaa laga filayaa inay abuuraan silsilado badan, taxane si ballaaran loo amaanay iyo bandhigyo sanadihii la soo dhaafay.
Cinwaanada kale ee asalka ah ee caanka ah waxaa ka mid ah 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'The Crown', 'Stranger Things' iyo sidoo kale abaalmarinno abaalmarin ah filimo sida 'Roma', 'The Irishman' and 'Guurka Story'.
Netflix waxay $ 12 bilyan ku bixisay iibsashada, soo saarista, iyo ruqsad siinta waxyaabaha asalka ah ee 2018, tiradan ayaa kor u kacday $ 15 bilyan sanadka 2019 waxaana la filayaa inay gaarto $ 17 bilyan sannadka 2020. Si wax loo eego, Disney waxay sheegtay inay $ 1 bilyan ku bixin doonto waxyaabaha asalka u ah Disney Plus sanadka 2020 iyo WarnerMedia waxay ku maalgelin doonaan illaa $ 2 bilyan HBO Max sanadkan.
Qorshayaasha rukunka iyo astaamaha:
Netflix waxay siisaa seddex qorshe oo qulqulaya macaamiisheeda:Aasaasiga, Heerka, iyo Premium.
Qorshaha gundhigga aasaasiga ah wuxuu leeyahay astaamaha ugu xadidan, laga bilaabo $ 8.99 bishiiba. Isticmaalayaasha waxaa loo oggol yahay inay ku eegaan waxa ku jira hal shaashad markiiba xallintuna waxay ku egtahay qeexidda heerka (SD).
Qorshaha socodka istaandarka ah wuxuu ku kacayaa $ 12.99 bishiiba wuxuuna u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ka sii daayaan waxyaabaha ku jira laba shaashad markiiba, qeexitaan sare (HD).Iyadoo la adeegsanayo qorshe gundhig ah, macaamiishu waxay ka eegi karaan waxyaabaha afar shaashad hal mar. Waxay ku kacaysaa $ 15.99 bishiiba waxaadna dooran kartaa inaad sii deyso waxyaabaha ku jira HD ama 4K Ultra HD haddii la heli karo.
Muuqaalka 'Profiles' ee lagu soo bandhigay 2013 wuxuu u oggol yahay macaamiisha inay la qabsadaan illaa shan astaamaha isticmaalaha. Astaamahani waxay la xiriiri karaan shaqsiyaad ama mowduucyada ay doortaan. Mid ka mid ah mawduucan ayaa ah 'Taariikhda habeenka'.
Kobaca Dhawaan iyo Qorshooyinka Mustaqbalka:
Netflix waxay heshay 15.8 milyan oo macaamiil rubucii ugu horreeyay ee sannadka 2020, oo ah lambar rikoodh cusub, oo dhab ahaan ay keeneen cudurka faafa ee coronavirus. Tani waxay muujineysaa koritaanka 22 boqolkiiba (sanadka oo dhan), iyadoo la diiwaangelinayo dakhliga soo gala saddexdii biloodba mar oo ah $ 5.77 bilyan.
Netflix waxay soo warisay inay tahay $ 14.17 bilyan oo deyn ah dhammaadka Maarso 2020. Warqadda saamileeda Q1 2020, shirkaddu waxay ku tiri 'qorshaheenna hadda waa inaan sii wadno isticmaalka deynta si aan u maalgelinno baahiyadeenna maalgashi'. Maaddaama ku dhowaad dhammaan waxsoosaarkii asalka ahaa ee Netflix uu hadda hakad ku jiro sababo la xiriira faafida, Netflix wuxuu sheegay in kharashka ku baxaya sanadka 2020 uu aad uga yaraan doono sidii markii hore la filaayay.
Si kastaba ha noqotee, Reed Hastings wuxuu ku kalsoon yahay 2021 inuu arki doono asal ka badan Netflix asalka 2020. Soo saaristu way ka gaabinaysaa Maraykanka marka loo eego Yurub iyo Aasiya. Intaas waxaa sii dheer, Netflix maahan shirkadda kaliya ee la kulanta dib u dhaca toogashada; labadaba Disney iyo WarnerMedia waxay lakulmeen istaag dhamaystiran oo dhanka wax soo saarka ah.
Tirakoobka Muhiimka ah ee Netflix ee 2020:
Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada ugu muhiimsan ee muhiimka ah, xaqiiqooyinka, iyo tirooyinka shirkadda soo kordheysa:
1) Inta badan barta fiidiyoowga fiidiyaha loo isticmaalo 2020 (Source: techjury)
Warqaddeeda Q1 2020, Netflix waxay daaha ka rogtay shirkadda inay aragtay qulqulka in ka badan 16 milyan oo isticmaaleyaal adduunka oo idil. Tani waxay u badan tahay inay sabab u tahay cudurka faafa ee coronavirus oo dadka ku xiraya guryahooda iyadoo aysan jirin wax badan oo ay qabtaan.
2) Tirada isticmaaleyaasha Netflix ee Mareykanka ayaa cirka isku shareertay (Source: Statista)
Yurub, Afrika, iyo Bariga Dhexe waxay ka yihiin 30% (47 milyan) saldhigga isticmaalaha, 18% (29 milyan) Latin Amerika, 9% soo hartayna (14 milyan) ayaa laga sameeyay isticmaalayaasha gobollada Aasiya iyo Baasifigga . Si kastaba ha noqotee, tirada isticmaaleyaasha ku nool Mareykanka iyo Kanada ayaa si aad ah u korodhay in ka badan 69.77 milyan rubuca hore ee sannadka 2020.
3) 41% ee isticmaaleyaasha Netflix ayaa qulqulaya iyadoon wax lacag ah lasiinin xisaab iyo xisaab wadaag (Source: Comparitech)
Qiyaastii 14% isticmaaleyaashu waxay daawadaan Netflix iyagoo isticmaalaya erayga sirta ah ee ay u diraan asxaabtooda ama xubnaha qoyskooda ee ka baxsan gurigooda. Iyo ku dhowaad 27% qulqulka adoo adeegsanaya rukunka laga bixiyay qof ka tirsan qoyskooda.
4) Dadka da'da dhexe badan ayaa isticmaalaya Netflix (Source: techjury)
Xogta Netflix ee 2020 waxay muujineysaa tiro aad u tiro badan oo qaangaar ah oo daneynaya goobaha soo dejinaya adeegyada. Marka la barbardhigo dhagaystayaasha da'da yar ee 2015. Da'da dhexdhexaadka ah ee sannadka 2020 waxay u muuqataa inay tahay 33-45 sano.
5) 47% isticmaaleyaasha ku nool Mareykanka waxay ka doorbidaan Netflix adeeg kasta oo hoormo ah (Source techjury)
Tartanka Netflix wuxuu isku dayay inuu soo gaabiyo farqigaan daal la’aan sanado badan. Waqtigan xaadirka ah Amazon Prime waxay doorbidayaan 14% dadweynaha, Hulu oo ah 13.6%, iyo Disney Plus oo 13% ah.
6) Hormuudka daabacayaasha barnaamijyada aan ciyaaraha ahayn ee Android adduunka oo dhan 2020 (Source: Statista)
Tiro badan oo ka mid ah saldhigga isticmaalaha Netflix ayaa doorbidaya qulqulka mobilada iyo kiniiniyada. Iyada oo ah barnaamij OS-ka saaxiibtinimo leh oo sahlan oo lagula socdo aalado badan, ma aha wax la yaab leh macaamiisha inay doortaan inay ku muquuniyaan taleefannada shakhsi ahaaneed.
7) Qeybinta jinsiga ee shaqaalaha ee qeybta hal abuurka iyo shirkadaha (Source: Statista)
Q3aad ee 2019, 52% shaqaaluhu waxay ahaayeen rag halka 48% ay ahaayeen dumar. Laga soo bilaabo Q2 ee 2020, Netflix waxay shaqaaleysiisay tiro is le'eg oo haween iyo rag ah oo u shaqeeya shirkadda adduunka oo dhan.
8) Miisaaniyadda asalka ah ee caalamiga ah sanadka 2020 (Source: Statista)
Netflix waxay u qoondeysaa ku dhowaad 80% kharashka ku baxa wax soo saarkeeda asalka ah. Shirkadda ayaa lagu soo waramayaa inay haysatay $ 15.3 bilyan oo miisaaniyadeed oo loogu talagalay wax soo saarka asalka ah ee 2019 waxaana lagu qiyaasayaa inay ku bixiso $ 17 kale 2020.
9) Macaamiilku waxay isticmaalaan qiyaastii 288GB bishiiba marka ay socdaan (Source: Comparitech)
Sannadka 2020, isticmaaleyaasha Netflix celcelis ahaan 3.2 saacadood oo fiidiyoow ah ayaa maalin walba la socda; tani waxay noqoneysaa 6 bilyan oo saac bil gudaheed. Haddii saacad qulqulaya ay isticmaasho 3GB xogtaada (haddii aad u maleyneyso inaad ku sii socoto HD oo aan ahayn 4K), xisaabtu waxay muujineysaa in isticmaaleyaashu ay gubanayaan illaa 288GB xogta bishiiba Netflix keliya.
10) Netflix waa mid ka mid ah isticmaaleyaasha ugu waaweyn ee Adeegyada Websaydhka Amazon (Source: Comparitech)
Shirkaddu waxay gebi ahaanba u guurtay waxyaabaha ay ka kooban tahay AWS sannadka 2016, oo ah muuqaal ay qaadatay 7 sano in la dhammaystiro. Netflix ayaa lagu soo waramayaa inay ku bixiso $ 9.6 milyan bishiiba AWS.
11) In kabadan 66% dadka isticmaala Netflix ayaa wadaaga furahooda sirta ah (Source: Comparitech)
Celcelis ahaan, waxaa jira 2.5 qof oo adeegsanaya hal koonto oo Netflix ah iyo saddex meelood labo meel dhammaan dadka isticmaala Netflix ay wadaagaan koontadooda. Xaqiiqdii, Sarkaalka Madaxa Sarkaalka ee shirkadda ayaa ku dhawaaqay adeeggu inuu raadinayo siyaabo saaxiibtinimo macaamiil ah si loo yareeyo wadaagista lambarka sirta ah.
12) APAC waxay kuxirantahay Netflix (Xigasho: Statistica)
Aasiya-Baasifigga ayaa weli ah suuqa ugu yar ee Netflix laakiin tirada dadka isticmaala ayaa si xawli ah u koraya. Saldhigga macaamiisha Netflix ee APAC wuxuu kudhowaad laban laabmay inta udhaxeysa horraantii 2019 iyo Q3 ee 2020.
13) Ireland waxay leedahay maktabada ugu weyn ee Netflix sanadka 2020 (Source: Comparitech)
Mareykanku wuxuu lahaa maktabadda ugu weyn ee Netflix sannadka 2019, oo leh 5,932 cinwaan. Laakiin laga bilaabo Abriil 2020, Ireland waxay ku faantaa 5,500 cinwaan. Boqortooyada Ingiriiska waxay leedahay maktabadda labaad ee ugu weyn oo leh qiyaastii 5,527 cinwaan, Kanada oo ku jirta kaalinta saddexaad oo leh 5,469 cinwaan, iyo Mareykanka oo afaraad leh 5,349 cinwaan.
14) Ku dhowaad saddex-meelood laba meel qoysaska Mareykanka waxay leeyihiin rukun Netflix (Source: Comparitech)
Sannadkii 2010, kaliya 16% qoysaska Mareykanka waxay leeyihiin koonto Netflix ah. Tiradan ayaa hadda ka boodday in ka badan 66%, taas oo ka dhigan saddex meelood labo meel dadka ku nool Mareykanka.
15) Qeybinta qowmiyadaha shaqaalaha Netflix sanadka 2020 (Source: Statista)
24% shaqaalaha Netflix ee Mareykanka waa Aasiyaan, iyo 8% Isbaanish, sida lagu muujiyey xogta shaqaalaynta illaa Q2 2020.
16) Saacadaha asalka ah ee asalka ah ee Netflix ee 2019 (Source: Statista)
Netflix wuxuu bilaabay qiyaastii 2,769 saacadood oo ah asalka asalka ah ee qaababka TV-yada, filimada, iyo wax soo saarka kale ee 2019. Wax soosaarka asalka ah ee shirkadda ayaa ku dhowaad labanlaabmay tan iyo 2016.
17) Magacaabista Oscar oo ku guuleystay (Xigasho: Ganacsiga Abka)
Wadar ahaan 24 filim ayaa loo magacaabay Oscars sanadka 2020. Labo magacaabis oo noocaas ah ayaa awood u yeeshay inay ku guuleystaan ​​abaalmarinta.
18) Netflix wuxuu ka dambeeyaa 14.92% saamiga taraafikada ee adduunka laga isticmaalo (Source: techjury)
Adeegyada qulqulka Netflix waxaa laga heli karaa in ka badan 190 dal. Boqolkiiba intaas way ka sii sarreeyaan gobollada mideeya, waana 19.1%. Waxay kuxirantahay hawlwadeenka shabakada Mareykanka, taraafikada guud ee Netflix ayaa gaari karta 40% taraafikada ugu sareysa.
19) Mashiinka talobixinta shakhsi ahaaneed ee Netflix ayaa qiimihiisu yahay bilyan (Source: Comparitech)
Netflix waxay aaminsan tahay in algorithm-keeda ay ku talineyso waxyaabaha loo qoondeeyey adeegsade kasta qiyaastii waa $ 1 bilyan sanadkii.
20) 8 ka mid ah 10kii isticmaaleba waxay ku qulqulaan barnaamijka Netflix shaashadda TV-ga (Source: Comparitech)
Sida laga soo xigtay Kooxda Cilmi-baarista ee Leichtman, 85% dadka isticmaala Netflix waxay ku sii daayaan adeegyada TV-ga. Tani waxay muujineysaa in tiro badan oo isticmaaleyaashu ay leeyihiin Smart TV ama, ay adeegsanayaan qalab dibadeed (Chromecast, Amazon Fire TV, iwm.) Ujeeddooyinka socodka.
21) Boqolaal abaalmarin ayaa muujinaya magacaabis iyo ku guuleysi (Xigasho: Comparitech)
Netflix waxay si firfircoon u daba socotaa abaalmarinnada markay abuureyso iyo suuqgeynta waxyaabaha ay ka kooban tahay. Shirkaddu waxay heshay in ka badan 430 magacaabista abaalmarinta iyo in ka badan abaalmarinno 70 ah. 29 ka mid ah abaalmarintaasi waxay ka tirsan yihiin taxanaha ‘House of Cards’.
22) Diiwaangelinta Netflix da'da Mareykanka gudihiisa (Source: Statista)
Laga soo bilaabo Maajo 2020, dadka da'doodu u dhaxayso 23 iyo 14 waxay u badan tahay inay haystaan ​​rukunka Netflix ee hadda, 70% warbixinta waxay ku qoran yihiin adeegga. Dadka ka weyn 50 waxay xisaabiyaan 39% wadarta saldhigga isticmaalaha Mareykanka.
Netflix qulqulka aan dhammaadka lahayn ee content ayaa runtii ah faa'iidadiisa ugu weyn. In kasta oo qaabkoodii ganacsi ee ugu horreeyay ee DVD-mail ahaan loogu oggolaaday inay la tartamaan magacyada caanka ah ee duurka ku jira sida Blockbuster, baaluqnimada iyo horumarka xilliyada is beddelaya ayaa ah waxa runtii u horseeda shirkadda inay noqoto magac qoys.
Markii ay soo if baxeen adeegyo hoormo oo cusub oo si wanaagsan loo aasaasay, shirkado waawayn oo ganacsiga ka shaqeeya, ayaa Netflix la filayaa in lugaha lagu hayo. Laakiin tani way ka fogaan kartaa runta. Dakhliga sanadlaha ah ee Netflix ee loogu talagalay adeegyada qulqulka ka sarreeyaa tartankeeda si walba.
Khatarta dhabta ah ee shirkadda, si kastaba ha noqotee, waa kharashyada barnaamijka. Miisaaniyadda maaddooyinka cusubi kor ayey u kacdaa sannad kasta, laakiin Netflix waxay si dhakhso leh ugu sii kordheysaa xariiqdeeda si ay uga caawiso kala-soocidda walaacan. Cabsida kale ee la xiriirta ayaa ah qiimeynta saamiyada ee suuqyada saamiyada oo ay u badan tahay inuu isbeddelo sannadaha soo socda.
Netflix waxay leedahay 12 bilood oo qiimeyn-u-dakhli ah (TTM P / E) oo ah 88.17, taasoo keentay koror aad u sarreeya. Laakiin haddii maal-gashadayaashu ay u arkaan inay tahay mid qiimo-dhaaf ah, tani waxay sababi kartaa in saamileyda hadda jira ay jiidaan maal-gashigooda ayna u guuraan goobo ammaan ah. Tani waxay si weyn u saameyn doontaa saamiyada, waana taas waxa kaliya ee maalgashadayaashu ay daneeyaan; qiimaha saamiyada.
Laakiin warka wanaagsani ma jiro tartan toos ah oo ka shaqeeya isla horyaal sida Netflix marka ay timaado qiimaha, tayada, ama adeegga. Marka illaa iyo inta shirkaddu ay sii wadayso hal-abuurnimada, abuurista, iyo tan ugu muhiimsan, ee ay ka dhigeyso macaamiisheeda ku qanacsan, Netflix wuxuu heli doonaa hab uu ku sii joogo xagga sare.
Disney Plus hoos miyaa? Hubi Xaaladda Adeegga Tooska ah
sida si ay u daawadaan filimo cusub oo lacag la'aan ah
sida aan laptop in chromecast tuuray
daawato xaddidan youtube videos dal kasta
daawado filimada buuxda oo lacag la'aan ah ma download
waxa goobaha movie free waa nabad